भण्डारी दम्पति हत्याबारे ‘क्लु’ नै फेला पारेन प्रहरीले
नारायण अधिकारी शनिबार, चैत १, २०७६, ११:११
काठमाडौं- कञ्चनपुरको शुक्लाफाँटा नगरपालिका-११ कलुवापुरस्थित घरमा ५२ वर्षीय जयलाल भण्डारी र उनकी श्रीमती २२ वर्षीया धनादेवी भण्डारी फागुन १५ गते मृत भेटिएका थिए। कञ्चनपुर प्रहरीको भनाइ सापट लिएर भन्ने हो भने ‘भण्डारी दम्पत्ति’ हत्या रहस्यमय अपराधमध्येकै रहस्यमय हत्या बनेको छ अहिले।
अपराध अनुसन्धानमा अब्बल मानिएका प्रहरी अधिकृतहरु दुई सातादेखि अनुसन्धानमा खटिए पनि हत्याको 'क्लु' फेला पर्न सकेको छैन। यही घटनालाई थप प्रष्ट्याउँदै कञ्चनपुरका प्रहरी प्रमुख एसपी मुकुन्द मरासिनी नेपाल लाइभसँग भन्छन्, ‘दुई सातादेखि हाम्रो टाउको दुखाइको विषय नै भण्डारी दम्पत्ति हत्या अनुसन्धान छ।’
धनाले नजिकै रहेको आफ्नो माइतबाट सधैं दूध ल्याउने गरेकी थिइन्। तर फागुन १५ गते उनी दूध लिन नआएपछि फुपुकी छोरी पार्वती रावल धनाको घर पुगेकी थिइन्। त्यतिबेला भण्डारी परिवारको घरको ढोका खुल्लै थियो। भान्साकोठामा धना रक्ताम्य अवस्थामा मृत भेटिएकी थिइन्। अर्को कोठाको खाटमा जयलाल पनि रक्ताम्य ढलेका थिए। मृत जयालालसँगै उनकी ६ महिने छाेरी चिच्याउँदै कराइरहेकी थिइन्।
त्यसपछि करिब १२ बजे दिउँसो यस घटनाबारे जानकारी दिइएपछि प्रहरी घटनास्थल पुगेर अनुसन्धान सुरु गरेको थियो।
नजिकै रहेको इलाका प्रहरी कार्यालय झलारीका प्रहरी निरीक्षक धर्मेन्द्र रावलको टोली सुरुमा घटनास्थल पुगेको थियो । त्यसपछि जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट एसपी मरासिनीसहितको टोलीले घटनास्थल पुगेर अनुसन्धान सुरु गरेको थियो।
आइसियुमा छटपटाउँदै ६ महिने शिशु : जसको बाआमाको दर्दनाक हत्या भयोबिहिबार, पुस १७, २०२६
प्रहरीले प्रारम्भिक अनुसन्धानमा उनीहरुको हत्या भएको र उक्त हत्या राति भएको निष्कर्ष निकालेको थियो। प्रहरीका अनुसार त्यसबेला घटनास्थलमा रगत जमिसकेको थियो, दुवै जनालाई घाँटी र टाउकामा प्रहार गरेर हत्या गरिएको थियो।
त्यसपछि अनुसन्धानमा जुटेको प्रहरी टोलीले दुई हप्ता बितिसक्दासमेत कुनै क्लु फेला पार्न सकेको छैन।
घटनास्थलमा भेटिएका कपडा, रगत, त्यहाँ हुनसक्ने फिंगर प्रिन्टलगायतका सबुद प्रहरीले उठाएको थियो। उनीहरुका छरछिमेकीसँग सोधपुछ गरे पनि कुनै नयाँ तथ्य प्रहरीले अहिलेसम्म फेला पार्न सकेको छैन। यसबारे एसपी मरासिनीले नेपाललाइभसँग भने, ‘अहिलेसम्म कसैलाई पक्राउ गर्न सकिएको छैन। प्रमाण संकलनमै समय खर्च भइरहेको छ ।’
प्रहरीको विधि विज्ञान प्रयोगशालाबाट समेत रिपोर्ट आउन बाँकी नै रहेकाले थप प्रमाण संकलन हुने र अनुसन्धानमा सहज हुने प्रहरीको ठम्याइ छ।
यद्यपि अनुसन्धान प्रगतिउन्मुख भएको प्रहरीको भनाइ छ। ‘केही व्यक्तिलाई प्रारम्भिक सोधपुछ गरिएको छ। तर श‌‌कास्पदका हिसाबले कसैलाई पनि सोधपुछ गरिएको छैन। घटनास्थलमा भेटिएका प्रमाणहरुमाथि अनुसन्धान गरेर त्यसको वास्तविकता केलाउन लागिरहेका छौं। श‌‍कास्पद केही व्यक्तिलाई लिस्टआउट गरेका छौं । अब त्यसलाई पुष्टि गर्न सकिन्छ/सकिन्न भन्ने विषयमा थप अध्ययन हुन्छ,’ उनले भने।
छोरामाथि नै शंका !
घटनास्थलमा भेटिएका सबुद, विभिन्न प्राविधिक र म्यानुअल पाटोबाट घटनाको सुक्ष्म रुपमा अनुसन्धान भइरहको प्रहरीले जनाएको छ। अनुसन्धानको दायरामा जयलालकै छोराहरु पनि देखिएको प्रहरीले स्रोतले जनाएको छ।
जयलालको पहिलो श्रीमतीको क्यान्सर रोगका कारण तीन वर्ष पहिला मृत्यु भएको थियो। अहिले हत्या गरिएकी धना उनकी कान्छी श्रीमती हुन्। पहिलो श्रीमतीतर्फका दुई छोरा छन्। जयलालले अर्को श्रीमती ल्याएपछि छोराहरुसँग उनको राम्रो सम्बन्ध थिएन।
घरायसी कुरामा विवाद हुँदा जयलालले जेठा छोरो भरतलाई खुकुरीले समेत हानेका थिए। सो घटनामा उनी २८ दिन प्रहरी हिरासत बसेर छुटेको अनुसन्धानबाट खुलेको छ ।
त्यसपछि छोराहरु जयलालसँग नबसेर भिन्दै बस्दै आएका थिए। राम्रो सम्बन्ध नहुनु र जयलालले खुकुरीले समेत हानेको अनुसन्धानबाट खुलेकाले छोराहरुमाथि संका गर्ने ठाउँ भए पनि अहिलेसम्म प्रमाण भने फेला नपरेको प्रहरीले जनाएको छ।
५२ वर्षका जयलालले २२ वर्षीय युवती धनालाई श्रीमतीको रुपमा भित्र्याएका थिए । धनाले आफ्नो प्रेमी हुँदाहुँदै जयलालसँग विवाह गरेको भन्ने गाउँलेले बताएपछि प्रहरीले त्यसतर्फ पनि अनुसन्धान अघि बढाएको छ।
दुई हप्तामा आइसियुबाट निकालियो शिशु
बाआमाको शवनजिकै उनीहरुकी ६ महिने छोरी ममता ओठमुख सुकाउँदै चिच्याउँदै रोइरहेकी थिइन्। ममताको उपचारका लागि भन्दै उनका मावलीले लिएर गएका थिए। उनको कैलालीस्थित माया मेट्रो अस्पतालले नि:शुल्क उपचार गरिरहेको छ ।
शिशुको उपचारमा संलग्न बाल रोग विशेषज्ञ डाक्टर मोहन साउदका अनुसार उनलाई निमोनिया र टाउकोमा चोट लागेको थियो। सिटीस्क्यान रिपोर्टले ती दूधे शिशुको टाउकोमा गम्भीर चोट लागेका देखाएको साउदले बताए। चोटले मस्तिकमा पनि असर परेको छ। छातिमा निमोनियाको संक्रमण छ। स्वासप्रश्वासमा समेत समस्या छ।
डा‍‍‍‍‍. साउदका अनुसार बच्चालाई उचालेर पछारेजस्तो देखिन्छ। त्यसपछि टाउकोमा चोट लागेको हुनुपर्ने उनको तर्क छ । चोटका कारण कम्पन र मुखबाट फिँज आएपछि फिँज सर्किएर निमोनिया भएको हुनसक्ने साउदले बताए। शुक्रबार भने शिशुलाई आइसियुबाट निकालेर राखिएको छ।
‘बाहिर वातावरणमा कस्तो हुन्छ भनेर आज हामीले आइसियुबाट निकालेर हेरेका छौं। अझै पूर्ण रुपमा ठिक भएको छैन। वेट एण्ड वाच मै छौं’ साउदले नेपाल लाइभसँग भने।
निको भएका ५३६५७०८७
अपडेटः माघ ९, २०७७। १७:३४ बजे। स्रोत : coronavirus.jhu.edu र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय
प्रहरीमाथि हातपात गर्ने पारलैंगिक समूहका १३ जना नियन्त्रणमा बिहीबार राति साढे १० बजे बाटो हिँडिरहेका सर्वसाधारणलाई हैरानी दिएको भन्ने गुनासो आएपछि महानगरीय प्रहरी प्रभाग नयाँबसपार्कबाट खटिएको... शुक्रबार, माघ ९, २०७७
प्रेमिकालाई गोली हानी हत्या गर्ने युवक १० वर्षपछि समातिए आफ्नो प्रेमिकालाई गोली हानी हत्या गर्ने युवक १० वर्षपछि पक्राउ परेका छन्। ताप्लेजुङको छाँगे–१ का कुमुकहाङ लिम्बू आङबुहाङलाई काठमाडौं... शुक्रबार, माघ ९, २०७७
अख्तियारलाई ७८ लाख घुस दिने लम्बोदरलाई ३५ लाख धरौटीमा रिहा गर्न आदेश आफ्नो आर्थिक अनियमितता र भ्रष्टाचार लुकाउन न्यौपानेले आयोगका तत्कालीन आयुक्त पाठकलाई ७८ लाख घुस दिएको प्रमाण सार्वजनिक भएपछि पाठकले... बिहीबार, माघ ८, २०७७
१८ शव लिन मलेसिया उड्यो निगमको वाइडबडी शुक्रबार, माघ ९, २०७७
टिचिङ अस्पतालमा अनलाइनबाटै टिकट लिन सकिने, यस्तो छ प्रक्रिया शुक्रबार, माघ ९, २०७७
प्रचण्ड-माधव पक्ष उत्साहित, उठ्ला त आन्दोलन? शुक्रबार, माघ ९, २०७७
आमसभा कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा माघ २३ गते देखाउँछौँ : ओली शुक्रबार, माघ ९, २०७७
बहस गर्न इजलासमा पुगेका वरिष्ठ अधिवक्ता आचार्य फर्काइए बिहीबार, माघ ८, २०७७